Refunds Policy - Shenzhen TronHoo Akangwara Technology Co, Ltd.
Nezve iyo 30-zuva rekudzoka mutemo:
Kana iwe uchida kuwana iyo yekudzosa ruzivo, ndapota taura nesu mukati memazuva makumi matatu mushure mekugamuchira.
Nezve chikumbiro chekudzorera, ndapota verenga inotevera ruzivo:
1. Kana iyo purinda isingakwanise kuvhurwa, kana kukuvara kana yaunzwa, kana isu zvinhu / zvigadzirwa zvatisingapindirane, unogona kuendesa kudzosera / kudzorera chikumbiro mukati memazuva makumi matatu.
2.Nezve edu 3D printer zvigadzirwa, isu tinopa 1-gore garandi yezvikamu zvese zvikuru zvinosanganisira iro mama bhodhi, mota, kuratidza skrini uye mubhedha unopisa. Zvipo, zvishongedzo uye zvikamu zvisina kusimba hazvina kuvharwa iyo warandi.
Ndokumbirawo unyoro bata runhare rwevatengi vedu pamberi pechero chikumbiro chekudzoka chekukuvara.
Kana risiri iro purinda racho pacharo dambudziko, hatizoitise mari yekutumira. Uye kana muchina wacho uchida kudzokera kuChina, isuwo hatizotakuri mutero unogona kuitika.
3. Kunze kwezvikonzero zvekushandisa, kana iwe usiri kuda chigadzirwa, uchiramba zvakananga pasuru, kana kudzoka nekuda kwezvikonzero zvako mushure mekusvitswa (inofanirwa kunge iri mune nyowani nyika), ungangoda kutakura yakatarwa fizi yakatumirwa nemutengesi uye mutengo wepakeji unodzoka.
Usati wadzosera chigadzirwa, ndapota tipe mufananidzo wezvigadzirwa kwatiri.
Kana chikumbiro chekudzoka changobvumidzwa, zvinogona kutora mazuva makumi maviri nemashanu kuti isu tigamuchire chigadzirwa uye kugadzirisa kudzoserwa mushure mekunge iwe watumira chigadzirwa kudzokera kwatiri.
Chii Chichaita TronHoo3D Ita
Kana iwe uine chero dambudziko nechedu chigadzirwa, ndapota taura nesu paFacebook kana neemail, TronHoo3D ichaongorora iyo nyaya uye kukupindura iwe nekukurumidza sezvazvinogona.
Isu tinokubatsira kugadzirisa dambudziko nekukutungamira iwe kuti uvandudze iyo Hardware, tipe hunyanzvi rutsigiro kana kutsiva izvo zvinowoneka zvikamu.
Iyo waranti yemuchina inoramba isina kuchinja.
Zvishongedzo: mamaboard, kamwene Kit, inopisa mubhedha bhodhi, kuratidza, pcb board, kunakidzwa nemazuva makumi matatu-Warranty (Standard 30 Day Warranty)
Ongorora: Hot Mata Stickers, mhuno, magineti mubhedha nezvimwe zvinoshandiswa hazvifukidzwe newarandi kana zvisina kukonzerwa nemuchina kutadza
* Nguva yewarandi inogona kusiyana zvichienderana nemitemo nemitemo.
Iko kushandiswa kwehukama ruzivo rwehukama
Nekuwana mushure mekutengesa sevhisi pasi peiyi mutemo, unobvumidza TronHoo kuchengetedza ruzivo rwako pachako kusanganisira zita, nhamba yefoni, kero yekutumira uye email kero. Isu tichadzivirira chengetedzo yeruzivo rwako.
TronHoo inovimbisa kuti kudzoreredza, kutsiva uye kugadzirisa garandi kunogona kukumbirwa kana zvichienderana nemamiriro ezvinhu anotevera:
Mari yekutumira inofanirwa kuvharwa nemutengi mumamiriro ezvinhu anotevera:
● Kudzorera zvigadzirwa kune chero chikonzero kunze kwekuratidzwa kuremara.
● Zvinotyisa zveMutengi zvinodzoka.
● Kudzorera zvinhu zvako pachako.
● Kudzorera zvinhu zvinonzi zvine hurema asi zvakawanikwa neTronHoo QC kuti iri kushanda.
● Kudzorera zvisina kukwana zvinhu mukutakura kwenyika.
● Mariro inosanganisirwa nekudzoka kusingatenderwe (chero kudzoserwa kunoitwa kunze kwenzira yekutenderwa).
Zvaunofanira Kuita Usati Wawana Mushure mekutengesa Sevhisi
Mutengi anofanira kupa humbowo hwakakwana hwekutenga.
TronHoo inofanirwa kunyora zvinoitika kana vatengi vachinetsa chigadzirwa.
Nhamba yechinhu chakashomeka yechinhu uye / kana humbowo hunoonekwa hunoratidza hurema hunodiwa.
Zvinogona kunge zvichidikanwa kudzorera chinhu kuti chiongororwe mhando.
Uchapupu hwakakodzera hwekutenga:
Order nhamba kubva pakutenga kwepamhepo kunoitwa kuburikidza neTronHoo Official chitoro